Izinzuzo Zokuhlolwa kwamakhuphoni nezaphulelo | Martech Zone
Ngabe ukhokha iphrimiyamu ukuthola imikhondo emisha, noma unikeza isephulelo ukuze uzihehe? Ezinye izinkampani ngeke zithinte amakhuphoni nezaphulelo ngoba zesaba ukwehlisa umkhiqizo wazo. Ezinye izinkampani sezincike kuzo, ngokunciphisa ingozi yenzuzo yazo. Akungabazeki ukuthi bayasebenza noma cha. Ama-59% wabakhangisi bedijithali bathe izaphulelo nezinqwaba ziyasebenza ekutholeni amakhasimende amasha.
Ngenkathi izaphulelo zingavamile ekushayeleni izinzuzo zesikhashana, zingalimaza umugqa wakho ophansi, futhi ziqeqeshe wonke amakhasimende angalokothi athenge ngentengo ephelele. Lokho akusho ukuthi imikhiqizo akumele yehlise nhlobo - abathengisi abasezingeni eliphezulu manje sebegxile ekuthumeleni izaphulelo ngamasu okubaphatha njengemishini yokuguqula okukodwa. UJason Grunberg, Sailthru
Ukhiye wokuphinda usebenzise amakhuphoni nezaphulelo ukuwahlola. Ama-53% wabakhangisi bedijithali benza ukuhlolwa okuthuthukile kwe-A / B noma kwe-multivariate. Bheka amazinga wokuguqulwa, iziteshi ezisetshenzisiwe, imvamisa yokuthenga, inani le-oda elijwayelekile kanye nenani lempilo yamakhasimende atholwe ngamakhuphoni nezaphulelo.
Sabelane ngakho konke abathengisi badinga ukwazi ngamakhuphoni namasu esaphulelo ku-infographic yangaphambili. Kodwa-ke, konke kwehla ngokuhluka kwenani, ukugoqa, kanye nemvamisa yezaphulelo uze uthole inhlanganisela elungile eheha futhi igcine amakhasimende ngaphandle kokwephula ibhange!
Tags: inani le-oda elijwayelekileiziteshiamasu amakhuphoniamakhuphoniamasu esaphuleloisaphulelo eminyakeni yobudijithaliinani lamakhasimende lempilo yonkeinani lempilouseyilitesting